သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: 2011
ခပ်ပြင်းပြင်းလေး လွမ်းပါရစေတော့... မောင်....။
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 1:12 AM3comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ဒီည........ ဘာကို လွမ်းမှန်း မသိဘူး...
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 1:11 AM4comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
Will Smith's After-the-rain
မိုးပန်းလေးကို နမ်း၊ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ရယ်မောတယ်..။
တစ်ကိုယ်လုံး စိုတဲ့မိုး... ညိုတဲ့ မိုး....
ညို့မှိုင်းတဲ့ မိုး၊ စိတ်ကူးလေး နဲ့ ခိုးလို့ နမ်းတော့..
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:50 AM6comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : ကဗျာလို့ ထင်တာပါပဲ
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 10:55 PM 8 comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:01 AM5comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : ကဗျာလို့ ထင်တာပါပဲ, မောင်
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:56 PM5comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:50 PM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စိုးလွင်လွင် ဆိုတုန်းကလည်း အရမ်းနှစ်သစ်ခဲ့တယ်..
မျိုးကျော့မြိုင် ပြန်ဆိုတော့ ပိုတောင် နှစ်သက်ပါတယ်..
မျိုးကျော့မြိုင် အသံက နောက်ခံဂီတနဲ့ တစ်ထပ်တည်း ငြိမ်ပြီး ထွက်လာတာ...
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 11:55 PM6comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 4:02 PM5comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
သူမသိစေ.. ၊ ရှိပါစေတော့
မောင်.. ဖတ်လိမ့်မယ် မဟုတ်သော..
မောင်စိန်ဝင်း ပုတီးကုန်းရဲ့ ကဗျာလေးပါ...
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:09 AM2comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : ကဗျာ, ခံစားချက်, မောင်, မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)
ကျမ ဒီလောက်တောင်ပဲ ပျော့ညံ့တတ်နေပြီလား မောင်..။
ညနေစောင်းပြီမို့ ကျီးကန်းတွေတောင် အိပ်တန်းတက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေကြပြီ။
ညို့မှိုင်းတဲ့ ကောင်းကင်မှာ လခြမ်းကွေးကလေးက ကလေးလေးလို အိပ်တော့မလို့ပေါ့။
ဒါကို လေပြေလေးက ခပ်တိုးတိုးတိုက်ခတ်လို့ ချော့သိပ်ဖို့ ကြံနေတယ်။
မချင့်မရဲ လှမ်းနေတဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို ဦးနှောက်က ခပ်တိုးတိုး ကျိန်ဆဲသံက
ခြေလှမ်းတွေက မကြားဟန်ပြုလို့ ဆက်သွားနေခဲ့တယ်။
မသာလည်း တ၊ သာ လည်း တ တဲ့...။ ဟုတ်သလားကွယ်..။
လမင်းက ခပ်တိုးတိုးပြုံးတယ်၊ စမ်းချောင်းလေးက တိတ်တခိုးလှောင်တယ်။
ဆံပင်တွေ လေမှာလွင့်နေတာကို လက်နဲ့အသာစုသိမ်းပြီး သစ်ပင်ဘေးက ခုံတန်းကလေးမှာ ထိုင်လိုက်မိတယ်။
မောင်နဲ့ ထိုင်နေကျ သစ်ပင်ရိပ်ကို ကျမ တစ်ခေါက်ပြန်ရောက်ရပြန်ပြီ..မောင်။
ဒါပေမယ့် မောင် ရှိ မနေဘူး မဟုတ်လား..
မောင် ရှိနေလိမ့်မယ်လို့လည်း ကျမ မယုံကြည်တာ ကြာခဲ့ပါပြီမောင်..။
ဒါပေမယ့်... ဒီသစ်ရိပ်ကို ကျမ နှလုံးသားက
မချစ်တတ်တဲ့ ကျမကို ချစ်တတ်အောင်သင်ပေးပြီးကာမှ
ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တဲ့ မောင့်ကို ကျမ ဘယ်မှာ လိုက်လို့ ရှာရမှာလဲ..မောင်ရယ်...
အခုတော့ ဒီသစ်ရိပ်အောက်မှာ စမ်းရေစီးသံကို နားထောင်ရင်း..
မောင်ပေးဖူးခဲ့တဲ့ အိပ်မက်တွေကို မျှော်လင့်နေရင်း....
မောင့် ကတိတွေကို.... မယုံကြည်ပေမယ့် စောင့်စားရင်း....
ဟိုးအဝေးမှာ သီချင်းသံ သဲ့သဲ့ ကြားလိုက်ရတယ်မောင်...
မောင်.. မှတ်မိဦးမယ်ဆိုရင်ပေါ့.. မောင်ရယ်..
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 1:08 AM6comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : မောင်
ဖေဖေ သိပ်ကြိုက်တဲ့ သီချင်းပါ.. ဖေဖေက လိဒ် တီးတော့ သံစဉ်ကိုကြိုက်တယ်ထင်တယ်။ စာသားကတော့ ဘာမှ အနုပညာသိပ်မမြောက်ပါဘူးလို့ ထင်မိတယ်။ "ငါ့ကိုပြုစားနေတယ်.. အောက်လမ်းမရယ်" အဲသလိုမျိုးကြီးပါပဲ..။ ခံစားချက်တွေကို တေးသံထဲမှာ ပေါက်ကွဲထားတာ..
ကလေးဘ၀ထဲက ဖေဖေနားထောင်တော့ (ဖေဖေက အဲတုန်းက ကိုယ့်မျက်စိထဲ သိပ်အိုတယ် ထင်ပေမယ့် ၃၂ လောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ် :P) ကိုယ်တိုင်လည်း အဲသလို လိဒ်တီးကြည့်ချင်လို့ ငယ်ငယ်က ကျင့်ခဲ့ဖူးပေမယ့်....
အောက်က မိန်းကလေးလောက်တော့ မကျွမ်းကျင်ခဲ့ပါဘူး...။
ဒီလောက်တီးနိုင်ဖို့ကို တစ်နေ့တစ်နေ့ ဒါကိုပဲ စိတ်ဝင်တစားကျင့်ထားတယ်ဆိုတာ ကိုယ်တိုင်တီးဖူးတော့ သိပါတယ်.. ~~ unless she's totally gifted!! :)
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 9:38 AM4comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 6:51 AM5comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
Sandra Bullock ရယ်..
Gwen Stefani ရယ်...
ဂျပန်ကို ဒေါ်လာတစ်သန်းစီ လှူသလို....
ကမ္ဘာကြီးထဲက လူတွေကလည်း အုန်းအုန်းကြွက်ကြွက်
မျက်နှာမွဲ ကိုယ်တို့ကို စကားထဲ ထည့်ပြောကြမယ်ဆိုရင်...
ယူပြန်ရင်လည်း မနူ ဘူးဆိုရင်…
မရောက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ သတင်းတွေ မလွှင့်ကြဘူးဆိုရင်..
ဒီသတင်းတွေဟာလည်း ဟုတ်သင့်သလောက် ဟုတ် မနေဘူးဆိုရင်….
ငုတ်တုပ်ထိုင်ရင်း … လေထဲမှာ (အခုလို) သေနတ်ပစ်
ကိုယ့်လည်ပင်း ကိုယ်ကြိုးကွင်းစွပ်မိ မနေကြဘူးဆိုရင်….
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 1:18 PM6comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : ကဗျာ, ကဗျာမဟုတ်တဲ့ကဗျာများ, ခံစားချက်, ချစ်သောမြန်မာပြည်
စိမ်းမြ သစ်ရွက်တို့ ကြွေနေဆဲ....
တစ်ရေးမှ မပျော်တဲ့ည မှောင်လွန်းနေဆဲ..
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 5:33 PM3comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ဗင်ကူးဗားမြို့လေးအကြောင်းကို Time Lapse နဲ့မှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုလင့်ခ်လေးပါရှင်....
သီချင်းကို ကျယ်ကျယ်လေးဖွင့်ပြီး ကြည့်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 2:19 PM7comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
ကဏ္ဍ : Vancouver
ဘေးကလင့်ခ်တွေ အကုန်ဖြုတ်လိုက်ရပါတယ်။ ကော့မန့်တွေတော့ ဒီတိုင်းလေး ထားထားတယ်။
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 1:35 PM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
♫ ♥●••·˙ ဘယ်လောက်ပဲ ရက်လနှစ်ရှည်ကြာ....
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:31 AM No comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 3:20 AM6comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:46 PM 23 comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 1:07 AM 8 comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ
သိပ်လှတဲ့ အချစ်ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ကို..
အဲ့ဒီကဗျာလေးဟာ အခြားသော ဆရာစိန်ဝင်းရဲ့ မြောက်မြားလှစွာသော ကဗျာတွေလိုပဲ
ကျမရဲ့ ရင်ကို ခုရွယ်ထိ လှုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်..
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 2:21 AM 11 comments: သက်ဆိုင်တာလေးတွေ